Puntland News | Archive | October
WAR DEG DEG AH oo hadda Boosaaso naga soo gaarey iyo warar ka soo kordhay qarax magaalada laga maqlay.
Laamaha ammaanka gobolka Bari oo lahadlay weriye ku sugan Boosaaso ayaa xaqiijiyey in qarixii caawa ladhigay qeybta Dambe ee Shirkadda Amal Bank (ama daarta Amal Plaza) uu qarxay , aysana jirin wax saameyn leh uu qaraxaasi geystay marka laga yimaado bur bur aan sidaa u badnayn oo soo gaaray goobta uu qaraxo ka Qarxay . […]
DAAWO MUUQAAL-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo dhaawac…
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ugu tagay dhaawacyadii la geeyey Dalka Turkiga ayaa marka hore warbixin ka dhageystay Maamulka Isbitaalka Ugu weyn ee ay yaalaan dhaawacyada .\_
WAR DEG DEG AH-Mas’uul katirsan Puntland oo caawa la weeraray+goobta iyo magaca…
Wararka aanu ka helayno degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal ayaa sheegaya in dabley hubaysani ay weerar ku qaadeen xoghayaha maamulka degmada Dangorayo. Xoghaye Cabdulqaadir Abshir Muuse ayaa qoraal kooban oo uu soodhigay bartiisa Facebook ku sheegay in rasaas lagu furay islamarkaana uusan waxba ku noqon oo uu ka badbaadey. Ciidanka ammaanka ayaa ku raad jooga […]
WAR DEG DEG AH-Jugta qarax laga maqlay magaalada Boosaaso xagee kadhacay?.
Wararka ka imaanaya Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in magaalada laga maqlay jugta qarax kadhacay mid kamid ah xaafadaha magaalada. Qaraxaani oo aan ilaa hadda la shaacin cid wax ku noqotay iyo cidda lala beegsaday ayaa waxa uu kadhacay sida wararku sheegayaan wadada ka dambaysa Hotelka Amal Place. LA SOCO WIXII SOO […]
DEG DEG+SAWIRRO-Cutubyo katirsan ciidanka PSF Puntland oo magaalada Boosaaso
Ciidamada Amniga Puntland ayaa xalay ilaa maanta waxay xaafadaha iyo waddooyinka magaalada Bosaso ka wadeen hawlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada. Bartilmaameedka iyo ujeeddada hawlgalkan ayaa ah soo qabashada xubno ka tirsan ururada argagixisada Al Shabaab iyo Daacish oo ku dhuumaalaysanaya gudaha magaalada Bosaso; Intii hawlgalkani socday ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen rag […]
SAWIRRO-Maxaadan ogeyn oo ka socda Galkacyo, xaafado madaafiic lagu garaacay iyo ciidan…
Xaaladda magaalada Galakcyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa degan kadib markii malayshiyaad la rumaysan yahay inay katirsan yihiin Galmudug ay madaafiic ku garaaceen qaar kamid ah xaafadaha waqooyiga Galkacyo ee Puntland ka arrimiso. Puntland ayaan wali ka hadlin tallaabadaan ay Galmudug ku dhaqaaqday, inkastoo uu san jirin khasaare xoogan oo kadhashay, waxaase shacabka magaaladu sheegeen […]
WAR DEG DEG AH-Dhowr kamid ah Alshabaab oo dhintay kadib markii ay la qaraxday miino ay dhigayeen wada soo gasha B..
Sida ay ku soo waramayaan dad ku nool deegaan qiyaastii 10KM ujira degmada Balcad ee gobalka Shabeelaha Dhexe waxa ay miino ay dhigayeen kula dagaalamayaal la sheegay in ay ka tirsan Al-Shabaab. Ugu yaraan 4 qof ayaa la sheegay in ay ku dhintayn Miinada kuwaas oo ahaa raggii dhigayay Miinada sida ay noo xaqiijiyeen dadka […]
DEG-DEG: Dhegayso: Mid kamid ah saraakiisha ciidanka Puntland oo u dhaartay madaxweyne Gaas kuna hanjabay inuu gacantiisa ku xiridoono.
DEG-DEG: Dhegayso: Mid kamid ah saraakiisha ciidanka Puntland oo u dhaartay madaxweyne Gaas kuna hanjabay inuu gacantiisa ku xiridoono. Halkaan ka dhegayso.
DEG-DEG: Shir ay Yeesheen Ganacsatada iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumada Puntland oo Fashil ku Dhamaaday
Wararka ka imaanaya Dekeda Magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in uu Fashil ku dhamaaday Shir socday 5-Saacadood,kaas oo ujeedkiisu ahaa sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan dekeda magaalada bosaaso. Shirkan waxaa Goobjoog ka ahaa Wasiirka Maaliyada, Wasiirka Dekedaha Iyo Wasiiro-ku xigeeno. Ganacsatada Gobolka Bari ayaa hordhigay Shuruudo Adag Oo aan marna gorgortan laga geli […]
DEG-DEG: DAAWO Hoobiyayaal lagasoo tuuray koonfurta Gaalkacyo oo ku dhacay waqooyi Gaalkacyo.
Hoobiyayaal lagasoo tuuray koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa lagu garaacay xaafado kuyaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo, laakiin wax khasaare ah ma geysan. Hoobiyayaashaan ma aysan qarxin, waxayna ku dhaceen meelo bannaan ah, sida ay soo sheegeen dadka xaafada. Ma ahan markii ugu horeysay oo ay sidaani dhacdo.
DEG-DEG: SAWIRRO: Xasan Sheikh oo booqday dhaawacyadii loo qaaday kuna dhowaaqay…..
Madaxweynihii hore ee soomalia Xasan shiikh maxamuud ayaa booqday dadkii kusoo dhaawacmay qaraxii 14-kii bishaan ka dhacay isgooyska zoobe ee hadda xaaladdooda caafimaad lagu dabiibaayo cisbitaalada dalka turkiga. Xasan Sheikh ayaa ku dhowaaqay inuu ku dadaalidoono inuu si joogto ah uga warqabidoono dhaawacyada maadaama uu isagu degen yahay dalka Turkiga.
DEG-DEG: Puntlandews oo heshay warqadii sababtay inay istaagto shaqada dekeda Bosaso.
Warbaahinta Puntlandnews oo aad uga barateen Xogo hoose ayaa helay Warqad kaso baxday Wasaaradda Maaliyadda Puntland, taasi oo khidmad saaraysa ganacsatada. Khidmadan ayaa waxaa loo Sharciyeeyay Hay’ada Taya dhowrka ee ka hawlgasha Dekeda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Warqadan ayaa waxaa lagu soo saaray amar kaso baxay Wasiirka Maaliyadda Puntland, hasa yeeshe waxaa soo […]
DEG DEG-Koox baastoolad ku hubaysan oo goor dhoweyd dil fuliyey iyo goob jooge ka hadlay cidda la toogtey+xog
Koox Bastoolad ku hubeysan ayaa maanta qof shacab ah ku dishay Xaafadda Tarabuunka degmada Hodan ee Gobalka Banaadir sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Goob joogayaal ayaa sheegay in ay arkeyn Wiil Bastoolad ku hubeysan oo tooganaya qof Sahcab ah oo ku sugnaa Nawaaxiga Isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodan lamana oga Sababta keentay. Qofka la […]
WARARKII UGU DAMBEEYEY-Alshabaab oo weerar culus soo qaaday lana wareegey duleedka magaalada B…
Ururka Al-Shabaab ayaa xalay la wareegay gacan ku haynta Degaanka Rasadaay ee duleedka Degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay isaga baxeen Ciidanka AMISOM. Ciidamada Uganda ee qaybta ka ah AMISOM, ayaa gelinkii dambe ee Isniintii isaga baxay Degaanka Rasadaay, iyadoona ay muddo gaaban kadib la wareegeen Shabaabka. Ciidamada Uganda, ayaan la garanayn […]
WAR DEG DEG AH-Shacabkii oo kala cararay kadib markii goor dhoweyd gaari qarax xoogan sida lagu qabtay bartamaha
Warar hadda nasoo gaaray ayaa waxay sheegayaan kala carar xooggan uu ka bilowday nawaaxiga warashadda caanaha ee magaalada Muqdisho, kadib markii la sheegay in cidiamada ay ka shakiyeen gaari nooca loo yaqaan Inataree oo halkaasi yaalla, lagana baqayo inuu qarxo. Ciidamada ayaa kala eryay shacabkii iyo gaadiidkii halkaasi ka dhowaa, waxaana ay u sheegeen in […]
DEG DEG+DHEGAYSI-Dagaal laga cabsi qabo inuu qarxo, Soomaaliland oo ciidan xoogan soo dhoobta iyo Puntland oo hub iyo ciidan diyaaris gashay.
Maamulka Soomaaliland ayaa lagu soo waramayaa inuu sanaadiiqda codaynta geeyey deegaamo katirsan gobolka Sanaag, waxaana gelbinaya ciidamo katirsan kuwa millatariga ee maamulka Soomaaliland, waxaana laga cabsi qabaa inuu ka qarxo dagaal u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland. Waxgaradka gobolka Sanaag ayaa Puntland ku eedeeyey inaysan dan ka lahayn gobolka, islamarkaana ay afka oo kaliya ka sheegato […]
WARARKII UGU DAMBEEYEY-Xaaladda dekedda Boosaaso iyo ciidanka Puntland oo magaalada saaka…
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in dekedda Boosaaso aysan weli si rasmi ah u howlgelin kadib cabasho ay maalmihii ugu dambeeyey muujinayeen ganacsatada wax ka dhoofsada iyo kuwa wax ka soo degsada dekedda. Xubno katirsan golaha wasiirada dowladda Puntland, maamulka gobolka Bari iyo maamulka rugta […]
DEG-DEG: DAAWO: Madaxweyne Gaas oo caawo si weyn u eedeeyay urur diimeedyada sida Ictisaam iyo Islaax, fartana ku goday inay xiriir laleeyihiin argigixisada
Madaxweyne Gaas ayaa yidhi,” haddii wadaada diinta sida Ictisaam iyo Islaax aysan ummadda usoo bandhigin dhibaatada Shabaabka iyo sida ay diinta qaladka uga galeen, hadde ogaada dad badan ayaa aaminaya ficilada ay sameeyaan iyo waxa ay ummada u sheegayaan. Mararka qaarkiisna adigoo og ayaaba shaki ku galayaa nimankaas waxay sheegayaan inay sax yihiin, haddii aad […]
DAAWO: madaxweyne Farmaajo oo jeediyay khudbad dhiiri galin u ah Alshabab iyo sababta ay isku qarxiyaan.
Axmed Madoobe,” Diinta Islaamka iyo dhaqankeena meelna kagama xusno inaan daqiiqad aamunso oo maro cas xirano, si aan murugo umuujino.
“ In daqiiqado aan aamusno ama aan weer cas xirano hadii ay dhibaatada daawo u tahay bal saacado badan aan qoraxda taagnaano oo aan amarkaas wada qaadano. Diinta Islaamka meel ay uga taal in daqiiqad la aamuso ma jirto iyo dhaqanka suuban ee Soomalida naga daaya sheekadaas”.
DEG-DEG:- Wasiirka Arimaha WhatsApp-ka Oo Amaro Culus Dul Dhigay Maamulayaasha Guruubyada
Wasiirka Arimaha WhatsApp-ka Ee Dalka Zimbabwe Oo Amaro Culus Dul Dhigay Maamulayaasha Guruubyada
DEG-DEG: DAAWO: Dhalinyaradii beesha Isaaq ee sheegatay inay ka dambeeyeen qarixii Zoobe oo raali galin degdeg ah bixiyay kaidb markii……..
DEG-DEG: Guddoomiyaha gobolka Bari oo u dhaartay rugta ganacsiga Puntland
Gudoomiyaha Gobolka Bari Yusuf maxamad wacays Dhedo oo Maanta Ka Hadlay Kukankii Ka Dhacay Dekeda Bosaso Ayaa YIRI……. Majirto Wax Lacag ah Haba Yaratee oo Lagu soo Kordhiyey Cashuurtii iyo Porchagkii Dekeda ee Laga Qaadi Jirey Doonyaha iyo Marakiibtii Keeni Jiray Badeecadaha Dekeda Bosaso. Laakiin Waxaanu Oganahay In Ay Arintaan Ay Lug ku leedahay Maamulka […]
Drs Maryan ma ahayn Masiixiyad!
Hurdo ayaan ka soo toosay. Sida caadada ii ah, haddii aan ammin haysto waxaan isha mariyaa wararka iyo baraha bulshda. Farriimihii la iigu soo diray Facebook waxaan ka xushay hal mid oo widaaygeey ii so diray. Haddaan furey waaba dhiillo iyo dhimaal. Waxaan ugu warceliyey hadal nuxurkiisa aha: wayska qalin daarasho iyo ku dhibcabadsi. Ka […]
Talefeshinada ugu dhageysiga badan Soomaaliya oo lasoo saaray iyo talefeshinada Puntand laga leeyahay oo la xaqiray.
WAR DEG DEG AH-Ururka Alshabaab oo diley nin 51 jir ah meydkiisiina waxaa lagaga argagaxay isagoo yaal
WAR DEG DEG AH-Ururka Alshabaab oo diley nin 51 jir ah meydkiisiina waxaa lagaga argagaxay isagoo yaal Ururka Al-shabaab ayaa degaanka Buq-Aqable ee Gobolka Hiiraan ku toogtay Cali Axmed Caddow oo ka mid ahaa dadka degmada Jalalaqsi ee Gobolkaasi Hiiraan. Cali; oo 51jir ah ayey Al-shabab ku eedeeyeen in uu jaajuus u ahaa Ciidamada dowladda […]
TOP NEWS-Yaa ku guulaystay doorashadii ku celiska ahayd ee wadanka Kenya.
Guddiga doorashada ee Kenya ayaa ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta la doortay ka dib doorashadii ku celiska ahayd ee dhacday 26-kii bishan. Uhuru Kenyatta ayaa helay 98.26 boqolkiiba codadkii la dhiibtay, halka hogaamiyaha mucaaradka ee loolanka adag ku hayay uu helay 0.09 boqolkiiba. Laakiin Raila wuu qaadacay doorashada kamana qeybgalin.
DEG-DEG: Akhriso: Mooshin ka dhan ah xukuumada Soomaaliya oo loo gudbiyay barlamaanka.
Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa Guddoonka Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka u gudbiyay mooshin ku saabsan xaalada amni ee dalka. Kusimaha Guddoomiyaha ahna Guddoomiye kuxigeenka Golaha shacabka C/wali Sheekh Ibraahim Muudey ayaa fadhigii maanta ka sheegay inuu ka guddoomay Xildhibaano ka tirsan Golaha shacabka mooshinka. “Xildhibaano ka tirsan Golaha shacabka waxay ii keeneen mooshin […]
DEG-DEG: Akhriso: Shirkii Muqdisho uga socday madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamulada oo la isku raacay Ajendayaashii.
DEG-DEG: Akhriso wareegto: Madaxweyne Gaas oo go’aan culus kasoo saaray muranka dekeda Bosaso, amarna ku bixiyay in laga guuro.